ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် - မြန်မာနယ်စပ်တွင် တွေ့ရသည့် ဒုက္ခသည်များ / Reuters
အမေရိကန် အောက်လွှတ်တော်က သူတို့ကိုယ် သူတို့ ရိုဟင်ဂျာဟု ခေါ်ဆို နေကြသည့် မွတ်စလင် များ အပေါ် မြန်မာတပ်မတော်၏ လူမျိုးစု သုတ်သင်ရှင်းလင်းခြင်းအား ပြစ်တင်ရှုတ်ချသည့် ဆုံးဖြတ် ချက်ကို ယနေ့ အတည်ပြုလိုက်သည်။
ထိုဆုံးဖြတ်ချက် H. Con. Res. 90 ကို အောက်လွှတ်တော်က ၄၂၃ မဲ၊ ကန့်ကွက်မဲ ၃ မဲဖြင့် အတည် ပြုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ရခိုင်ပြည်အတွင်း တိုက်ခိုက်မှုများကို ရပ်တန့်ရန်နှင့် လူသားချင်း စာနာမှု အကူ အညီများ ချက်ခြင်း ပေးပို့ခွင်ပြုရန်လည်း တောင်းဆိုလိုက်သည်။
“ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ မွတ်စလင်များကို မြန်မာ အစိုးရက ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းမျာစွာ စနစ်တကျ ဖိနှိပ်ခဲ့ ကြောင်း၊ အများစုက နိုင်ငံမှာနေတာ မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာ ကြာပေမယ့် ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသားဥပဒေ အရ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်မရကြောင်း၊ လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့်မရသလို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု နဲ့ ပညာရေး ဝန်ဆောင်မှုမရကြောင်း၊ အပေါ်ဆုံးကနေအောက်ဆုံးအထိ မြန်မာအစိုးရ အဆင့်ဆင့် နှိမ်ထာကြောင်း” အောက်လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ရွိုက်စ်က မနေ့က ကျင်းပသော အစည်းအဝေး တွင်ပြောသည်။
မြန်မာတပ်မတော်၏ ရခိုင်ပြည် စစ်ဆင်ရေးများအတွင် မွတ်စလင် ၆သိန်း ထွက်ပြေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အမေရိကန်က လူမျိုးစု ရှင်းလင်းမှု အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
“ရာနဲ့ ချီတဲ့ သေဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့လည်း ဆိုတယ်၊ အဓမ္မပြုကျင့်တယ်၊ အမျိုးမျိုး နှိပ်စက်တယ် ဆိုတဲ့ သတင်းတွေလည်း ထွက်တယ်၊ သတင်းသမားတွေကို သွားခွင့်မပေးဘူး၊ အနည်းဆုံး ရွာ ၂၀၀ လောက် မီးရှို့ခံရတယ်၊ မြေမြုပ်မိုင်းတွေကြောင့် ထွက်ပြေးသူတွေ ဒဏ်ရာရတယ်လို့ ဆိုကြတယ်ဟု ရွိုက်စ်က ဆိုသည်။
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရက်ဇ် တေလာဆန်၏ မကြာသေးမီက ပြောကြားခဲ့သည့် လူမျိုးစု သုတ်သင်ရှင်းလင်းခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုချက်ကိုလည်း ချီးကျူးခဲ့ပြီး၊ ဒုက္ခသည်တွေကို အလုံး အရင်း ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ့်ကိုလည်း ချီးကျူးကြောင်း ပြောဆိုပေမယ့် အသစ်ရောက် လာသူတွေအတွက် အဆောက်အအုံတွေ ဆောက်ပေးဖို့နဲ့ ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးမယ်ဆို တဲ့ ကတိကိုတော့ လေးစားလိုက်နာဖို့ လိုကြောင်း ပြောသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၄၇ သန်းပေးမည်ဟု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရက်စ်တေလာဆန်က မကြာသေးမီက ကြေညာလိုက် သည့် အတွက် အမေရိကန်သည် ဒေသအတွက် ယခုနှစ်အတွင်း အကူအညီပေးမှု သန်း ၁၅၀ ကျော် သွားပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ဤသည်မှာ အင်မတန်လိုအပ်သည့် အကူအညီဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
ထို့အတူ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံကို နေရပ် စွန့်ခွာထွက်ပြေးလာရသူတွေ ဘေးကင်းပြီး ဆန္ဒအလျှောက်ပြန်လာနိုင်ရေးကိုလည်း ထိပ်တန်း ဦးစားပေးအဖြစ်သတ်မှတ်ရမည်” ဟု တိုက်တွန်းသည်။
ထို့အတူ မြန်မာအစိုးရနှင့် တပ်မတော်ဟာ လူမျိုး၊ ဘာသာဆိုသည်များကို ထည့်မတွက်ဘဲ အကာ အကွယ်ပေးဖို့ ၊လေးစားလိုက်နာဖို့၊ တာဝန်ရှိသူများကို တရားဥပဒေအရ ရင်ဆိုင်ဖို့ လည်း ပြောဆိုသည်။
ထိုသို့ ပြစ်တင်ရှုတ်ချသော ဆုံးဖြတ်ချက်အတည်ပြုနိုင်ခြင်းအတွက် အောက်လွှတ်တော် ဒီမိုကရက် တစ် ပါတီအုပ်စု ဥက္ကဌ ဂျိုးခရိုလီကလည်း ချီးကျူးဂုဏ်ပြုလိုက်ပြီး မြန်မာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့မှ လူ့အခွင့် အရေးချိုးဖေါက်မှု အတွက်တာဝန်ရှိသူများကို ပိတ်ဆို့ အရေးယူရန် ထရမ့် အစိုးရအား တိုက်တွန်း လိုက်သည်။
ထိုဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းက ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ခေါင်းဆောင် ဂျိူးခရိုလီ နှင့် ရီပတ်ဗလင်ကန် ကိုယ်စား လှယ် စတိရှာဗော့တို့ ကရေးသားခဲ့ ပြီး ကွန်ဂရက်ကိုယ်စားလှယ် ၃၀တို့ က ကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ရက်ဇ် တေလာဆန်သည် ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလ ၁၅ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ယင်းခရီးစဉ်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်တို့ နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပိတ်ဆို့ အရေးယူခြင်းက ရခိုင်အကျပ် အတည်းအတွက် အဖြေမဟုတ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ပူးတွဲပြုလုပ်သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောဆိုခဲ့သည်။
သို့သော် အမေရိကန်သို့ ပြန်ရောက်ပြီး နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေများသည် ရိုဟင်ဂျာများကို လူမျိုးစု သန့်စင်ရှင်းလင်းမှုဖြစ်သည် ဟု ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး၏ ထိုသို့ ပြောဆိုနေချိန်တွင် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် တရုတ်ဗဟိုစစ်ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး လီကျူးဝေါချင်း ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ တရုတ်ပြည်သို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးသွားရောက်ခဲ့သည်။
အလားတူ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်လည်း နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့တွင် တရုတ်ပြည်သို့ ချစ်ကြည်ရေး ခရီးသွားရောက်ခဲ့ပြီး သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။